अध्यक्ष प्रचण्ड अमेरिकाबाट नेपालका लागि प्रस्थान, भोली आइपुग्ने - Everest Dainik - News from Nepal
अध्यक्ष प्रचण्ड अमेरिकाबाट नेपालका लागि प्रस्थान, भोली आइपुग्ने
२०७५, १३ चैत्र बुधबार
काठमाडौं, चैत १३ । पत्नी उपचारका लागि अमेरिकामा रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष प्रचण्ड आज नेपाल फर्किने भएका छन् । १० दिनको अमेरिका बसाईपछि प्रचण्ड परिवारसहित नेपाल फर्किन लागेका हुन् । १० दिनको अमेरिका बसाइँपछि बुधबार नेपाल फर्किन लागेका प्रचण्डकी स्वकीय सचिव गंगा दाहालले दिइन्। उनले सीताको वासिंटनस्थित मेडिस्टार अस्पताल र बरमिंघमस्थित युएबी अस्पतालमा उपचार भएको जानकारी दिइन्। प्रचण्डकी छोरीसमेत रहेकी गंगाकाअनुसार उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले सीताको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार आउने बताएको छन्।
याे पनि पढ्नुस प्रचण्डको प्रश्न– जनयुद्द नलडेको भए राजतन्त्र ढल्थ्यो ?
‘आमाको उपचारमा सहयोग गर्नुहुने राजदुत डा. अर्जुन कार्की लगायत सबैमा हार्दिक आभार र आमाको स्वास्थ्य जाँच वासिंटनस्थित मेडिस्टार हस्पिटल र बरमिंघमस्थित युएबी हस्पिटलमा भएको छ, डक्टरहरुको अनुसार आमाको स्वास्थ्यमा सुधार आउने विश्वास दिलाएका छन’, गंगाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उल्लेख गरेकी छन्।
याे पनि पढ्नुस नाम, कर्म र उद्देश्यमा गतिशील प्रचण्ड
सीता पार्किन्सनको बिरामी छिन्। उनी सुगर र उच्च रक्तचापबाट पनि पीडित छिन्। सीतालाई उपचारका लागि यसअघि भारत र थाइल्याण्ड लगायतका अस्पतालमा लगिएको थियो। त्यहाँ उपचार गर्दा पनि निको नभएपछि अमेरिका लगिएको हो। अमेरिका प्रस्थान गर्नुअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उनले संचारकर्मीमाझ पत्नी सीताले पनि आफूले एक पटक अमेरिका गएर स्वास्थ्य उपचार गर्ने मनसाय राखेपछि आफू उपचारका लागि अमेरिका जान लागेको बताएका थिए।
याे पनि पढ्नुस जनताका अगाडि गरेका घोषणा पूरा गर्ने संकल्प कायमै छः अध्यक्ष प्रचण्ड [भिडियोसहित]